Doosan Diesel Generator ကဘာလဲ။ - MECCA ပါဝါ
နေအိမ် / သတင်း / သတင်း / Doosan Diesel Generator ကဘာလဲ။
Doosan Diesel Generator ကဘာလဲ။
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-30 မူလ:ဆိုက်ကို
အပေြာင်းDooosan ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သောအစုံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် synchroned generator ကိုမောင်းထုတ်ရန်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုသောစွမ်းအင်သုံးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်မြန်ဆန်သောလည်ပတ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု,
DooSan Diesel Generator ကိုအမျိုးသားကာကွယ်ရေး, လေကြောင်းနှင့်အခြားအရေးကြီးသောလယ်ကွင်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောကြောင့်၎င်း၏အရွယ်အစား, ပေါ့ပါးခြင်း,
Doosan Diesel Generator အစုံအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်
Doosan Diesel Generator အစုံရွေးချယ်ရန်အကြောင်းပြချက်
အပေြာင်းDooosan ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သောအစုံDiesel နှင့်အတူစင်ကြယ်သောမျိုးဆက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများသည်အဓိကလောင်စာအဖြစ်ဖြစ်သည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကိုမီးစက် (ဆိုလိုသည်မှာလျှပ်စစ်ဘောလုံးဘောလုံး) ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်တွန်းအားပေးသည့်ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ် အသုံးပြု. Kinetic Energy ကိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့်အပူစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ Doosan Diesel Generator အစုံအပြည့်အစုံကိုအဓိကအားဖြင့်အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။
Subdivision ၏စည်းကမ်းချက်များအရအခြေစိုက်စခန်း, ဒီဇယ်အင်ဂျင်, အခြေစိုက်စခန်းလောင်စာဆီဌာနများသည် Controller (Air Counting: Air Counting: Fan), FAILE: FAING: FAIRE: FAING: FAING: FAIL: FAIRE: FAING: FAING: FAING: FAING: FAY AIL, FAIL: FAIRE: FAIRE: FAIRE: FAY, FAIL, FAIRE: FAIRE: FAING: FAING: FAIRE: FAIRE: FAIL, FAY, FAIRE: FAIL (FAY) ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများ၏လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအရမီးစက်ကိုပုံသေ။ ရွေ့လျားသည့်နောက်တွဲယာဉ်များသို့ဝေဖန်ကြသည်။ မီးစက်မှထုတ်လွှတ်သောဆူညံသံကိုလျှော့ချရန်လူတို့၏အလုပ်နှင့်ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များအားအသံတိတ်သေတ္တာများဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ အဆိုပါယူနစ်သည်မီးစက်ကိုကာကွယ်ရန်အတွင်းရှိအသံစုပ်ယူထားသောပစ္စည်းများကိုတပ်ဆင်ထားသည့်အပြင်ဘက်တွင်သတ္တုသေတ္တာတစ်လုံးကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ မီးစက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်အတွက်တံခါးများကိုတံခါးများ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်သတ်မှတ်ထားသည်။ အသံတိတ်သေတ္တာသည်မီးစက်အစုမှရရှိသောဆူညံသံများကိုလျော့နည်းစေရုံသာမကအိမ်ပြင်တွင်လည်းပါ0င်နိုင်သည်။ သေတ္တာသည်နေရောင်ခြည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မိုးရေ - အထောက်အထားများ, လူများကိုကယ်တင်ခြင်းအတွက်စက်ရုံခန်းမတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နေရာမရှိစေရ။ ဒီဇယ်စက်များသည်ဘုံမီးစက်နှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်မီးစက်အစုံများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအာဏာကိုဘုံစွမ်းအားနှင့်အဆင်သင့်ပါဝါအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ Generator set တစ်ခုစီ၏စံပြစွမ်းအားသည်အများအားဖြင့် standby power ၏ 80% ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များအရ, များသောအားဖြင့်သင့်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကြောင့်လိုအပ်ပါကအမျိုးသားဇယားကွက်ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အကယ်. သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာပြေးရန်လိုအပ်ပါကမကြာခဏအသုံးပြုသော Diessan Diesel Generator Set သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအသုံးပြုသည်ဆိုလျှင်အသုံးပြုသော Diessan Diesel Generator ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဘုံပါဝါနှင့် standby power အကြားဆက်နွယ်မှုမှာ - ဥပမာအားဖြင့်အသုံးပြုသူသည် 100kw Doosan Diesel Generator နှင့် 100Kw standby diessan diesel generator ၏ဘုံစွမ်းအင်သည် 100kw * 80% = 80kw ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 100kw doosan ဒီဇယ်ရောင်ထုတ်လုပ်မှု၏ပုံမှန်အတိုင်းပါ0င်သည်မှာ 80kw ဖြစ်သည်။ အကယ်. Doosan Diesel Generator Set သည်အသံတိတ်အကွက်တပ်ဆင်ထားပါကမီးစက်အစုံ၏စွမ်းအားသည်များသောအားဖြင့် 10% ခန့်ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူသည် Doosan Diesel Generator Set ကိုရွေးချယ်သောအခါအသံတိတ်သေတ္တာ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
DoSAN Mobile Power သည်မီးစက်ကို 20-1000kva ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Doosan Generator Unit System သည်ယူနစ်၏ရေနံအပူချိန်, ရေအပူချိန်, ရေနံဖိအား, မြန်နှုန်း, overload များစသည်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေး, စက်ရုံအရန်ကူးခြင်းနှင့်အရေးပေါ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, နှင့်အခြားလယ်ကွင်း။ ရွေးချယ်ရန်အမျိုးအစားလေးမျိုးရှိသည်။ Open type, တိတ်ဆိတ်သောအမျိုးအစား, နောက်တွဲယာဉ်အမျိုးအစားနှင့် Rainproof အမျိုးအစားများ။
3. တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းအား။
5. DoSan Diesel Generator သည်ဆေးထိုးနည်းပညာအသစ်နှင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနည်းပညာအသစ်များကိုကောင်းမွန်သောလောင်ကျွမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနည်းပါးသည်။
7. အခြားအလားတူအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Diossan Diesel Generator Set သည်အရွယ်အစားသေးငယ်သောအရွယ်အစား, ပေါ့ပါးသော,
MECCA Power ၏ဒီဇယ်ဆီမီးစက်အစုံများသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်စက်ရုံမှမထွက်ခွာမီစမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်သည်။ MECCA Power သည်သုံးစွဲသူများအား Diesan Diesel Generator အမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ထားသည့်ဖောက်သည်များကိုရွေးချယ်သည်။ သင်နှင့်ပူးပေါင်းရန်မျှော်လင့်ပါသည်
Doosan ဒီဇယ်မီးစက်အစုံ ဒီဇယ်ထွန်းလင်းစက်ကိုဖွင့်လှစ် Trailer သည်ဒီဇယ်ဆီထုတ်လုပ်သောအစုံ ဒီဇယ်မီးစက်သည်လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုသတ်မှတ်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဒီဇယ်ဆီမီးစက်အစုံ Cummins ဒီဇယ်ဆီမီးစက်တပ်ဆင်ထားသည် အသံတိတ် cummins ဒီဇယ်ထုတ်လုပ်သူ set